I-Treehouse-Idisinfected EWE ilinen EWE Izilwanyana zasekhaya zilungile - I-Airbnb
I-Treehouse-Idisinfected EWE ilinen EWE Izilwanyana zasekhaya zilungile
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguMaza
Relax kwaye uchukunyiswe yindalo kwi-Treehouse- le ndlela ye-retro ye-Beachhouse ibandakanya ilinen yokulala kunye ne-kayaks ehambelanayo. Ukuhamba ngokulula 100 yeemitha ukuya kunxweme lwenja yaseGuilderton. Yonwabela isiselo (iti kunye nekofu ibandakanyiwe) kumgangatho omkhulu osuka kwigumbi lokuphumla elingqongwe yimithi ye-eucalyptus. Yonwatyiswa ziintaka zasekuhlaleni ezifana neGalahs - imbewu yeentaka ebonelelwayo.
#Amoore_the_Treehouse - zikhululeke ukwabelana ngemifanekiso yakho.
Indawo yokuphumla yokuphumla kuwo onke amaxesha onyaka - isitovu somthi esihle ebusika!
Iikayak, iipaddles kunye neebhatyi zobomi zibandakanyiwe! Paka imoto yakho kwaye uhambe yonke indawo, ulwandle, umlambo, iivenkile kunye neGuilderton Country Club ebandakanya ibala legalufa, iinkundla zentenetya kunye ne-lawn bowling.
I-Treehouse ilungele izibini ezijonge ukubaleka kuyo yonke into, izibini ezi-2 zokwabelana okanye abantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2. Zombini ulwandle luyatshintsha kwaye umthi utshintsha yonke into enye. Le ndawo ijikelezwe yimithi yeEucalyptus esele ikhulile
Umgangatho owandisiweyo ovela kwigumbi lokuphumla uzisa ngaphakathi ngaphandle - kunye nemibono yemithi ejikelezileyo kunye nokubonwa kolwandle. Indawo yokuphumla epholileyo enomlilo weenkuni, isitovu segesi se-ilve 8, iTV yedijithali kunye nesatelayithi, iBlue Ray, iDVD, i-BBQ yegesi (ibandakanyiwe negesi) kunye nenkqubo yomculo weBose bluetooth. I-2 iikayak zabantu abadala, iipaddles kunye neebhatyi zobomi zibandakanyiwe, ziyafumaneka ngakumbi ukuba ziyafuneka.
Le ndlu inamagumbi amabini okulala elunxwemeni enezixhobo zangoku, yindawo efanelekileyo yokuphumla ebusika nasehlotyeni.
Ibandakanyiwe nale propati:
4 isitshisi Barbeque
Ndinesitovu segesi ukwenzela ukupheka abantu abathanda ukupheka
Umgangatho omkhulu kunye nokutshona kwelanga okukhulu
Umlilo wenkuni (uquka iinkuni)
TV / DVD / satellite dish
Ilinen yorhwebo (amashiti kunye ne-pillow slips) ifakiwe
Iziqholo kunye nezinto zokupheka
I-coffee perculator, igrinder yeembotyi
Le ndawo ifanelekile kwikhaya leholide:
Amaqabane ajonge indawo ethe cwaka
Izibini ezi-2 ezabelanayo
Usapho oluncinci (2 abadala kunye nabantwana aba-2)
Ababhexi / iiKayaks
Kuya kufuneka uze neetawuli zobuqu, iitawuli zaselwandle, izinto zangasese zobuqu kwaye sicebisa ukuba uze nezibonelelo ngenxa yobonelelo olulinganiselweyo kunye nokufumaneka.
Ilinen entsha yehotele ibandakanywe nale propati kunye ne-4 burner BBQ.
Kukho inani lezinto ezinomtsalane zendalo kwingingqi yeMoore River. Ukuhamba ngeenyawo, ukuhamba emahlathini, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa, ukuhamba ngenqanawa emlanjeni, igalufa, kunye nokuloba ukukhankanya nje ezimbalwa.
Iindlela ezininzi zokuhamba ngeenyawo ngaphakathi nakwiMoore River zivumela abakhenkethi ukuba bayonwabise indalo ngeyona ndlela ilungileyo. I-boardwalk entsha eyakhiwe ngaselunxwemeni olusenyakatho ivumela iindwendwe ukuba zixabise iintlobo ezininzi zeentaka okanye ziphumle kwaye zibe nepikiniki. Intlango yenye indawo edumileyo yokonwabela ukuzola kwaye uhambe kwi-sandboarding. Iindawo ezininzi ezidumileyo zokuba nepikiniki okanye ufumane indawo ekhethekileyo yakho ukonwabela okusingqongileyo.
Ukuloba emfuleni ecaleni kweMooreRiver foreshore okanye iboardwalk enokubanjwa okunje ngebream, itaylor kunye neherring.
Ukuloba elwandle kunokonwatyelwa ecaleni konxweme eGuilderton, eLedge Point, eCaraban naseQuinns Rock.
Zonke iindawo zigqwesile ekufotweni konxweme ngokutshona kwelanga okumangalisayo kunye nonxweme oluhle.
Guilderton has a Country Club owamkela non amalungu, a General Store, iinkundla intenetya, izitya lawn, kunye nomngeni 9 umngxuma ibala yegalufa.
Umbuki zindwendwe ngu- Maza
Ihlala ifumaneka nge-imeyile, nge-sms okanye ngefowuni ukuba iyafuneka.